https://www.jvxingchemical.com/uploads/f195581d3ac1b837e3dbf21ed64b1b86.mp4 Sharaxaadda Badeecadda CAS No. 122841-12-7 Magacyada kale: Cefoselis sulfate MF: C19H24N8O10S3 Nooca: Kaaliyeyaasha iyo Kiimikooyinka Kale ee Kiimikada Heerka Fasalka, Cosmetic Fasalka Fasalka Cuntada, Fasalka Daawada, Isticmaalka Fasalka Tech: Daawooyinka Animal Daawooyinka: 99% Muuqaalka: Budada Cad CAS: 122841-12-7 Shahaadada: Fasalka COA: Qiimaynta Fasalka Phamaceutical: 99% Min Sample: COA Availaalble Cefoselis ayaa si aad ah loo isticmaalaa sharad ...
EDB waa dhiirrigeliyaha amine ee aadka waxtarka u leh loona isticmaali karo iyadoo lala kaashanayo kuwa wax bilaaba UV sida ITX iyo DETX oo loogu talagalay daaweynta UV ee khadadka, waxyaabaha la isku qurxiyo iyo kuwa lagu dahaadho ee ku yaal waraaqaha, qoryaha, birta iyo caagagga.
Isugeynta lagu taliyay ee loogu talagalay EDB waa 2.0-5.0%, iyo fiirsiga lagu daro ee sawirqaadeyaasha loo adeegsado isku xirnaashaha waa 0.25-2.0%.
Deltamethrin (qaaciddada maadada C22H19Br2NO3, qaaciddada miisaanka 505.24) waa muraayad cad oo siyaasad qaabaysan ujecel oo leh dhibic dhererkeedu yahay 101 ~ 102 ° C iyo dhibic karkaraya 300 ° C. Waxay u dhowdahay in aan lagu milmi karin biyaha heerkulka qolka oo lagu milmi karo dareerayaal badan oo dabiici ah. Xasiloon ahaan iftiinka iyo hawada. Way ka xasilloon tahay dhexdhexaadka aashitada, laakiin ma xasilloon tahay dhexdhexaadka alkaline.
Hydrazine hydrate sida maaddooyinka ceyriinka kiimikada wanaagsan ganaax, inta badan loo isticmaalo wakiilka xumbada Avv; sidoo kale loo isticmaalay wakiilka daaweynta nadiifinta kuleeliyaha; soosaarka warshadaha lidka-dawooyinka ee qaaxada, dawooyinka ladagaalanka sokorowga; loogu talagalay sunta cayayaanka ee loo isticmaalo wax soo saarka warshadaha sunta cayayaanka, koritaanka dhirta wakiilada dib u heshiisiinta iyo nadiifinta,